‘जनता डेंगुको मारमा, मन्त्रीचाहिँ विदेश घुमिरहने ?” «
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरुले जनता डेंगुको मारमा परिरहँदा मन्त्री यादव भने विदेश शयरमा रमाइरहेको भन्दै आक्रोश पोखे । नेपाली कांग्रेसकी सांसद पार्वती डिसी चौधरीले मन्त्री यादवलाई प्रश्न गरिन्, “जनता डेंगुको मारमा परिरहँदा मन्त्रीचाहिँ विदेशमात्र घुमिरहने ?” उनले साउन १ गतेदेखि डेंगुको संक्रमण भएको बताएका मन्त्री यादवलाई असोज १ गते बल्ल त्यसबारे बताउन संसदमा उपस्थित भएको भन्दै योबीचमा कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? भनेर प्रश्न गरिन् ।
कांग्रेसका अर्का सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले डेंगु संक्रमितहरुले टेकु अस्पतलामा राम्ररी उपचार नपाएकोतर्फ नहेर्ने तर विदेशमात्र हेरिरहने भन्दै मन्त्री यादवको आलोचना गरे । “विकसित देशमा त नियन्त्रण भएको छैन । नेपालमा न्यून छ भनेर विदेश जाँदै हुनुहुन्छ । महामारीको बेलामा मन्त्री देश छाडेर हिँड्न मिल्छ ?” उनले भने ।
अर्का सांसद राजन केसीले जनता डेंगु संक्रमणमा हुँदा मन्त्री विदेशमा घुमिरहेको र अहिले बनिबनाउ र लिखित जवाफ दिएको भन्दै त्यसले जनताको चित्त नबुझ्ने बताए ।
बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले समेत मन्त्री यादवको आलोचना गरेका थिए । सांसदहरु विरोध खतिवडा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, जीवनराम श्रेष्ठ, नविना लामाले मन्त्री यादवले डेंगु नियन्त्रणमा कदम नचालेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । सांसद खतिवडाले सन्तान नहुनेका लागि सन्तानेश्वर बनाएजस्तो लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेश्वर महादेव स्थापना गरौं भन्दै व्यंग्य गरे ।
नेकपाकै अर्का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले डेंगु नियन्त्रणमा मन्त्रीको भूमिकाको आलोचना गरे । उनले काठमाडौंको जनघनत्वमा रोग फैलँदा विकराल हुनसक्ने भन्दै उपत्यकाभित्र विशेष अभियान चलाउन माग गरे ।
नेकपाकै सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले डेंगुबारे धेरैपटक कुरा उठे पनि मन्त्री यादव कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लगाए । “सभामुखले रुलिङ गरेपछि बल्ल चेत खुल्यो मन्त्रीज्यूको । यस्तो गैरजिम्मेवारीप्रति के छ जवाफ ? यस्तो संकट छ, बाहिर जाने ? स्वास्थ्यमन्त्रीजी, टेकुमा जानुभा’छ ?” उनको आक्रोश थियो ।
सांसद नविना लामाले जनता पीडित भइरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले शून्य काम गरेको टिप्पणी गर्दै स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशिल विषयमा मन्त्रालय जिम्मेवार नबनेको आरोप लगाइन् ।
‘आपतकाल घोषणा गर्नु पर्दैन’
उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले डेंगु रोगका कारण आपत्कालीन अवस्थाको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिँदै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय महामारी नियन्त्रण गर्न सक्षम रहेकाले आपत्कालीन अवस्था घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको जानकारी गराए ।
पछिल्ला दिनहरुमा रोगीको संख्या घट्दै गएको अभिलेख रहेको उपप्रधानमन्त्री यादवले सुनाए । १५ वर्षअघि २०६१ मा चितवनमा देखा परेको डेंगु हाल ५६ जिल्लामा फैलिएको उनको भनाइ थियो ।
“पाँच हजारभन्दा बढी मानिस यो रोगबाट प्रभावित भएका छन् । ६ जनाको निधन भएको छ । विश्वमै चुनौतीका रुपमा देखापरेको यो रोगको मुख्य कारण अव्यवस्थित शहरीकरण हो । लामखुट्टेबाट सर्ने अन्य रोग जापानी इन्सेफ्लाइटिसलगायत निर्मूल हुने चरणमा छ । औलोका कारण मृत्यु शून्यमा झरेको छ,” उनले भने ।
खोज र नष्ट गर अभियानका लागि तीन तहका सरकारले जनचेतना अभियान चलाइरहेकोे, प्रभावित जिल्लामा ११ हजार किट पठाइएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । उनले बढी प्रभावित धरान, इटहरी, विराटनगर, पोखरालगायत स्थानमा विशेष सफाइ अभियान सञ्चालन गरिएको बताए ।
डेंगु सहयोग कक्षको स्थापना, ज्वरो आएकाको निःशुल्क रक्त परीक्षण गरिएको, टेकुमा २० शैय्या डेंगु प्रभावितका लागि छुट्याइएको, विद्यालयमा जनचेतनामूलक खोज र नष्ट गर अभियान चलाउन थालिएको उनले बताए ।
बैठकमा सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले ५६ जिल्लामा डेंगु फैलिँदा पनि किन महामारीका रुपमा आपत्कालीन अवस्थाको घोषणा नगर्ने भनी प्रश्न राखेका थिए । त्यसैगरी सांसदहरु सुजाता परियार, खगराज अधिकारी, रामबहादुर विष्ट, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, अमनलाल मोदी, पुष्पा भुसाल, प्रेम सुवाल, पार्वता डिसी चौधरी, देवप्रसाद तिमल्सिना, मीना सुब्बा, जीवनराम श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, राजेन्द्रकुमार केसी, नवीना लामाले देशभर फैलिएको रोगका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।